अमिताभ बच्चन ः शताब्दी नायक
April 13, 2019 10:08 pm
अमिताभ बच्चन (जन्म-११ अक्टूबर) बलीवुडको सबभन्दा लोकप्रिय अभिनेता हुन् । १९७० को दशकमा उनले लोकप्रियता हासिल गरे । त्यसबेलादेखि नै भारतीय चलचित्र इतिहासको सबभन्दा प्रमुख व्यक्तित्व बनेका छन्।
बच्चनले आफ्नो करियरमा धेरै अवार्डहरु जितेका छन, जसमा तीन राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार र बाह्र फिल्मफेयर पुरस्कार समावेश छन् । उनको नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर अवार्डको रेकर्ड छ। अभिनय बाहेक बच्चनले पार्श्वगायक, चलचित्र निर्माता र टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता र भारतीय संसदको एक निर्वाचित सदस्यका रूपमा १९८७ देखी १९८४ सम्म भूमिका गरेका छन् ।
बच्चनको विवाह अभिनेत्री जया भादुडीसँग भएको हाे। उनको दुइ सन्तान छन्, श्वेता नन्दा र अभिषेक बच्चन।
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेशमा जन्मेका अमिताभ बच्चन हिंदू कायस्थ परिवारसँग सम्बन्ध राख्दछन्। उनको बुबा, डा. हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिन्दी कवि थिए । जबकि उनकी आमा जोड बच्चन कराचीको सिख परिवारसँग सम्बन्धित थिइन। सुरुमा बच्चनको नाम इंकलाब राखिेएको थियो । जुन भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको बेला प्रयोगमा गरियो । प्रेरित वाक्यांश इंकलाब जिंदाबादबाट लिइएको थियो तर त्यसपछि उनको नाम फेरी अमिताभ राखीयो जसको अर्थ हुन्छ, “यस्तो प्रकाश जुन कहिल्यै निभ्दैन”। यद्यपि उनको अन्तिम नाम श्रीवास्तव थियो फेरि पनि उनको बुबाले यस उपनामलाई आफ्नो कृतिहरू प्रकाशित गर्ने बच्चन नामबाट उद्धृत गरे। यो उनको अन्तिम नाम नैं हो । जससँग उनले चलचित्रहरूमा एवं सबै सार्वजनिक प्रयोजनहरूको लागि उपयोग गरे। अब यो उनको परिवारको समस्त सदस्यहरूको उपनाम बनेको छ।
अमिताभ, हरिवंश राय बच्चनको दुइ छोराहरूमा सबै भन्दा ठूलो हुन। उनको दोस्रो छोराको नाम अजिताभ हो। उनको आमालाई थिएटरमा गहिरो रुचि थियो र उनलाई चलचित्रमा पनि भुमिकाको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर उनले नैं रुचि गरिन् । अमिताभको करियरको चुनावमा उनको आमाको पनि केही भाग थियो । किन भने तिनीहरू संधै यस कुरामा पनि जोड दिन्थे कि उनले सेंटर स्टेजलाई आफ्नो करियर बनाउनु पर्छ। बच्चनको बुबाको देहांत २००३ मा भएको थियो र उनको आमाको मृत्यु २१ डिसेम्बर २००७ मा भयो ।
बच्चनले दुइ पल्ट एम.ए.को उपाधि प्राप्त गरेका छन् । मास्टर अफ आर्ट्स (स्नातकोत्तर) यिनले इलाहाबादको ज्ञान प्रबोधिनी र ब्याइज हाई स्कूल (बीएचएस) त्यसपछि नैनीतालको सिंहवुड कलेजमा पढे । जहाँ कला संकायमा प्रवेश दिलाईयो । अमिताभ त्यस पछि अध्ययन गर्नको लागि दिल्ली विश्वविद्यालयको किरोडीमल कलेज गए । जहाँ यिनले विज्ञान स्नातकको उपाधि पाए। २० वर्षकाे उमेरमा बच्चनले अभियनमा आफ्नो करियर प्राप्त गर्नको लागि कोलकताको एक शिपिंग फर्म बर्ड एण्ड कंपनीमा भाँडाको ब्रोकरको नोकरी छोडिदिए।
३ जून, १९७३ मा यिनले बङ्गाली संस्कार अनुसार अभिनेत्री जया भादुडीसँग विवाह गरे।
प्राराम्भिक कार्य १९६९ -१९७२
अमिताभ बच्चन आनन्द ( १९७० )
बच्चनले चलचित्रहरूमा आफ्नो करियरको सुरूआत ख्वाजा अहामीद अब्बासको निर्देशनमा बनेको सात हिंदुस्तानीको आठ कलाकारहरूमा एक कलाकारका रूपमा गरे, उत्पल दत्त, मधु र जलालआगा जस्ता कलाकारहरू सँग अभिनय गरेर; चलचित्रले वित्तीय सफलता प्राप्त गरेन तर बच्चनले आफ्नो पहिलो चलचित्रको लागि राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारमा सर्वश्रेष्ठ नवागंतुकको पुरूस्कार जिते। यस सफल व्यावसायिक र समीक्षित चलचित्र पछि उनको अरु एक आनन्द ( १९७१ ) नामक चलचित्र आयो जसमा उनले त्यो समयको लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना सँग काम गरे । डा. भास्कर बनर्जीको भूमिका गर्ने बच्चनले क्यान्सरको एक रोगीको उपचार गरे जसमा उनीसँग जीवन प्रति वेबकूफी र देशको वास्तविकताका प्रति उनको दष्टिकोणको कारण उनलाई आफ्नो प्रदर्शनको लागि फिलिमफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार प्राप्त भयो।
यसपछि अमिताभले (१९७१) मा बनेको परवानामा एक मायूस प्रेमीको भूमिका निभाए जसमा उनको साथी कलाकारहरूमा नवीन निश्चल, योगिता बाली र ओम प्रकाश थिए र उनले खलनायकको रूपमा चलचित्रमा कैद गर्नु आफैमा धेरै कम देख्न पाउनु जस्तो भूमिका थियो। यसपछि उनको धेरै चलचित्रहरू आए जुन बक्स अफिसमा त्यति सफल भएनन् । जसमा रेशमा र शेरा (१९७१) पनि शामिल थियो । ती दिनहरू यिनले गुड्डी चलचित्रमा पाहुना कलाकारकाे भूमिका निभाएका थिए। यिनको साथ उनको पत्नी जया भादुडीसँग धर्मेन्द्र पनि थिए। आफ्नो जबरदस्त आवाजको लागि चिनिने अमिताभ बच्चनले आफ्नो करियरको प्रारंभमा नैं उनले भान्से चलचित्रको केही भागको त्यस पछि वर्णन गरे। १९७२ मा निर्देशित एस. रामनाथनद्वारा निर्देशित कमेडी चलचित्र बम्बे टू गोवामा भूमिका निभाए। यिनले अरूणा ईरानी, महमूद, अनवर अली र नासिर हुसैन जस्ता कलाकारहरू सँग काम गरेका छन। आफ्नो संघर्षका दिनहरूमा उनी ७ (सात) वर्षको लामो अवधिसम्म अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय पछि शाह महमूद साहबको घरमा अढि रहे।
स्टारडम १९७३ -१९८३
सन् १९७३ मा जब प्रकाश मेहराले उनलाई आफ्नो चलचित्र जंजीर (१९७३)मा इंस्पेक्टर विजय खानका रूपमा अवसर दिए । यहींबाट उनको करियरमा प्रगतिको नया मोड आयो। यो चलचित्र पूर्वका रोमान्सले भरिएको सार प्रति कटाक्ष थियो । जसले अमिताभ बच्चनलाई एक नयाँ भूमिका ए‌न्ग्रीयाेँग म्यान देख्यो । जो बालीवुडको एक्शन हीरो बनेका थिए । यही त्यो प्रतिष्‍ठा थियो जसलाई आफ्नो चलचित्रहरूमा हासिल त्यसको अनुसरण गर्नु थियो। बक्स अफिसमा सफलता पाउने एक जबरदस्त अभिनेताका रूपमा यो उनको पहिलो चलचित्र थियो। जसले उनलाई सर्वश्रेष्‍ठ पुरूष कलाकार फिल्मफेयर पुरस्कारको लागि मनोनित गरायो। १९७३ नैं त्यो वर्ष थियो जब यिनले ३ जूनमा जयासँग विवाह गरे र त्यहि समयमा यी दुवै एक साथ धेरै चलचित्रहरूमा देखा परे । जस्तो अभिमान जुन उनको विवाहको केवल एक महिना पछि नैं रिलीज भएको थियो। त्यस पछि हृषिकेश मुखर्जीको निदेर्शन तथा बीरेश चटर्जी द्वारा लिखित नमक हराम चलचित्रमा विक्रमको भूमिका गरे । जसमा दोस्तीको सारलाई प्रदर्शित गरिएको थियो। राजेश खन्ना र रेखाको विपरीत उनको सहायक भूमिकामा उनलाई एकदम सरहना गरिएको थियो । उनलाई सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकारको फिल्मफेयर पुरस्कार दिइयो।
१९७४ को सबै भन्दा ठूलो चलचित्र रोटी कपडा अाैर मकान मा सहायक कलाकारको भूमिका गरे पछि बच्चनले धेरै चलचित्रहरूमा धेरै पटक पाहुना कलाकारको भूमिका निभाए जस्तो कुंवारा बाप र दोस्त। मनोज कुमार द्वारा निदेशित र लिखित चलचित्र जसमा दमन र वित्तीय एवं भावनात्मक संघर्षहरूका समक्ष पनि ईमानदारीको चित्रण गरिएको थियो, वास्तवमा आलोचकहरू एवं व्यापारको दृष्टिबाट एक सफल चलचित्र थियो । यसमा सह कलाकारकहरू भूमिकामा अमिताभको साथीको रूपमा कुमार स्वयं र शशि कपूर एवं जीनत अमान थिइन्।
बच्चनले ६ डिसेम्बर १९७४मा रिलीज मजबूर चलचित्रमा अग्रणी भूमिका निभाए यो चलचित्र हालीवुड चलचित्र जिगजेगको नक्कल गरेर बनाईएको थियो जसमा जार्ज कैनेडी अभिनेता थिए । तर बक्स अफिसमा यो केही खास गर्न सकेन । १९७५ मा उनले हास्य चलचित्र चुपके चुपके, देखी लिएर अपराधमा बनेको चलचित्र फरार र रोमान्स चलचित्र मिलीमा आफ्नो अभिनयका जौहर देखाए। तथापि, १९७५को वर्ष यस्तो वर्ष थियो जसमा उनले दुइ चलचित्रहरूमा भूमिका गरे र जसलाई हिन्दी चलचित्र जगतमा धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ। उनले यश चोपडा द्वारा निर्देशित चलचित्र देवलमा मुख्‍य कलाकारको भूमिका गरे जसमा उनी सहित शशि कपूर, निरूपा राय र नीतू सिंह थिए । यस चलचित्रले उनलाई सर्वश्रेष्‍ठ अभिनेताको फिल्मफेयर पुरस्कार दिलायो। १९७५ मा यो चलचित्र बक्स अफिसमा हिट रहेर चौथे स्थानमा रह्यो र इंडियाटाइम्सको मूवीहरूमा बलीवुडको हर हालमा हेर्न योग्य शीर्ष २५ चलचित्रहरूमा पनि नाम आयो। १५ अगस्ट, १९७५मा रिलीज शोले भारतमा कुनै पनि समयको सबै भन्दा धेरै आय अर्जित गर्ने चलचित्र बनेको छ ।
बच्चनले इंडस्ट्रीको केही शीर्षको कलाकारहरू जस्तो धर्मेन्‍द्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया बच्चन र अमजद खानसँग जयदेवको भूमिका निभाएका थिए। १९९९ मा बीबीसी इंडियाले यस चलचित्रलाई शताब्दीको चलचित्रको नाम दियो र दीवार को तरिका यसलाई इंडियाटाइम्‍ज मूवीहरूमा बालीवुडको शीर्ष २५ चलचित्रहरूमा शामिल गर्यो। त्यसै वर्ष ५० औं वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कारको निर्णायकहरूले एक विशेष पुरस्कार दियो जसको नाम ५० सालको सर्वश्रेष्ठ फिलिम फिल्मफेयर पुरूस्कार थियो। बक्स अफिसमा शोले जस्तो चलचित्रहरूको जबरदस्त सफलता पछि बच्चनले अहिलेसम्म आफ्नो स्थितिलाई मजबूत गरेका थिए । १९७६ देखी १९८४ सम्म उनलाई अनेक सर्वश्रेष्ठ कलाकार वाला फिल्मफेयर पुरस्कार र अन्य पुरस्कार एवं ख्याति प्राप्त भयो। हुनत शोले जस्तो चलचित्रहरूले बालीवुडमा उनको लागि पहिले देखी नैं महान एक्शन नायकको दर्जा पक्का गरिदिइएको थियो । फेरि पनि बच्चनले भने कि उनी दोस्रो भूमिकाहरूमा पनि स्वयंलाई ढाल्छन र रोमान्स चलचित्रहरूमा पनि अग्रणी भूमिका गर्नेछन जस्तो कभिकभि (१९७६) र कामेडी चलचित्रहरू जस्तो अमर अकबर एन्थनी (१९७७ ) र उनले पहिले पनि चुपके चुपके (१९७५) मा काम गरिसकेका छन्। १९७६ मा उनलाई यश चोपडाको आफ्नो दोस्रो चलचित्र कभिकभिमा साइन गराए । एक रोमान्सको चलचित्र थियो ।
१९७७ मा यिनले अमर अकबर एन्थनीमा आफ्नो प्रदर्शनको लागि सर्वश्रेष्ठ अभिनेताको फिल्मफेयर पुरस्कार जिते। यस चलचित्रमा उनले विनोद खन्ना र ऋषि कपूरसँग एनथनी गन्जालेज नामबाट तेस्रो अग्रणी भूमिका गरेका थिए। १९७८ संभवत: उनको जीवनको सर्वाधिक प्रस‌शनिय वर्ष रहयो र भारतमा ती समयको सबै भन्दा अधिक आय अर्जित गर्ने चार चलचित्रहरूमा यिनले स्टार कलाकारकहरू भूमिका निभाए। उनले एक पल्ट फेरि कस्मे वादे जस्तो चलचित्रहरूमा अमित र शंकर तथा डनमा अंडरवर्ल्ड गैंग र उसको जुम्लियअ विजयका रूपमा दोहरो भूमिका निभाए। .यसको अभिनयले उनलाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेताका फिल्मफेयर पुरस्कार दिलायो र उनको आलोचकहरूले त्रिशूल र मुकद्दरको सिकंदर जस्तो चलचित्रहरूमा उनको अभिनयको प्रशंसाको तथा यी दुइटै चलचित्रहरूको लागि उनलाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेताको फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त भयो।